दाङमा बसले कारलाई ठक्कर दिँदा एक महिलाको मृत्यु, सांसद वलीसहित १४ घाइते – जलजला अनलाइन
दाङमा बसले कारलाई ठक्कर दिँदा एक महिलाको मृत्यु, सांसद वलीसहित १४ घाइते
Posted on February 7, 2019 Author Comments Off on दाङमा बसले कारलाई ठक्कर दिँदा एक महिलाको मृत्यु, सांसद वलीसहित १४ घाइते
माघ २४, दाङ । दाङमा बसले कारलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने १४ जना घाईते भएका छन्।
घोराही–लमही सडक खण्डको मुसोट खोला नजिकै भएको दुर्घटनामा परि रूकुम पश्चिमको खलंगा नगरपालिका वडा नं. २ मुसिकोट निवासी अन्दाजी २७ बर्षीया रमिता शर्माको मृत्यु भएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द्रप्रसाद रिजालले जानकारी दिए।
बिहीबार बेलुका पौने ५ बजेतिर ५ नं. प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार वली सवार कारलाई यात्रुबहाक बसले ठक्कर दिँदा उक्त दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परि सांसद वली गम्भीर घाइते भएका छन्।
सांसद वलीको हात र टाउकोमा चोट लागेको जानकारी दिइएको छ। ‘देखिने गरि टाउकोमा घाउ भने छैन,’ प्रजिअ रिजालले भने ‘बाँके पुर्‍याएर उपचार थालेपछि थप कुरा भनौंला।’
उनका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित मसोट खोलाको वरालोमा कारलाई जोगाउन प्रयास गर्दा बस तल खसेको थियो। त्यही बसमा च्यापिएर रुकुम पश्चिम निवासी शर्माको मृत्यु भएको प्रजिअ रिजालले बताए।
घोराहीबाट लमहीतर्फ जाँदै गरेको ना ५ ख ५५२९ नम्बरको यात्रुबहाक बसले लमहीबाट घोराही तर्फ आउँदै गरेको सांसद वली सवार कार बा १८ च ६८३६ नम्वरको कारलाई ठक्कर दिँदा उक्त दुर्घटना भएको थियो।
सांसद वली बुटवलबाट तुलसीपुरस्थित घर तर्फ फर्कदै थिए। कारमा सांदस वली र अर्का युवा लिला विक मात्रै सवार थिए। कार सांसद वलीले आँफै चलाएको भन्ने खुल्न आएको छ। बसमा सवार १२ यात्रु र कारमा रहेका सांसद वलीसहित दुई जना समेत गरि १४ जना घाइते भएका छन्।
Posted on April 12, 2019 Author जलजला अनलाइन
चैत २९, धनगढी । प्रतिबन्धित समूह नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा समूहको पूर्व कार्यकर्तालाई सघाएको आरोपमा प्रहरीले ४ महिने शिशुसहित एक महिलालाई हिरासतमा लिएको छ । हिरासतमा रहेका देवर रुपलाल देउकरबारे समान्य सोधपुछ गर्ने भन्दै सीता देउकरलाई बुधवार उनकै घर कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–५ बाट बच्चासहित हिरासतमा राखेको परिवारिक स्रोतले जनाएको हो । सीताकी अर्का […]
दार्चुलामा भुकम्प गयो, क्षतिको विवरण आउन बाँकि
Posted on December 6, 2017 December 6, 2017 Author जलजला अनलाइन
मङ्सिर २०, दार्चुला । दार्चुला जिल्लामा बुधबार राति ९ बजेर ५ मिनेटमा भुकम्पको धक्का महसुस भएको छ । दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम भन्दा १८० किलोमिटर टाढा भारतको उत्तराखन्ड केन्द्रबिन्दु बनाएर ५.७ रेक्टर स्केलको भुकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख रत्नमणि गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । दार्चुला सहित प्रदेश नम्बर ७ का बैतडी, डडेलधुरा लगायत जिल्लाहरु र […]
साउन १७, काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक बर्षदेखि लागू हुने गरी सवारीसाधनको अन्तःशुल्क इन्जिन क्षमताअनुसार निर्धारण गरेपछि महँगाा सवारीसाधनको मूल्य उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीमा २ हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । भने चारपाङ्ग्रे सवारीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म बढेको देखिन्छ । आजको कारोबारमा खबर छ । बजेटमार्फत चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे […]
एउटा पुरुष यौनकर्मीको सनसनीपूर्ण खुलासा